ပြိတ္တာဘုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » ပြိတ္တာဘုံ
Posted by ေအး၀တီ ၾကီး on Jun 18, 2012 in Letter to The Editor, Myanmar Gazette | 47 comments
ဇွန်လ(၃)ရက်နေ့ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို ့မှ အကြမ်းဖက်လူသတ်မှုကြီးတွင် နောက်ဆက်တွဲ
(၁)အခင်းမဖြစ်ပွားမှီ ကျောက်နီမော် မုဒိန်းမှုကိစ္စစာရွက်များ ဝေငှထားခြင်း
(၂)ထိုစာရွက်များ ဝေငှသည်ကို NLD ပါတီမှလုပ်ဆောင်သည်ဟု လုပ်ကြံ
(၃)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မော်လဘီ များနှင့် တွေ ့ဆုံပြီးနောက် ဘူးသီးတောင်၊
မောင်တော ပြဿနာ ပိုမိုကြီးထွားလာခြင်း
(၄)ဒုက္ခသည် မှန်လျှင် လူမျိုး၊ဘာသာမရွေး ကူညီပါဟု မှာသည်ကို ကုလားအားပေးလုပ်
(၅)တောင်ကုတ်၊စစ်တွေ မြို့တို ့၌ ဗိုလ်ချုပ်ဦးအောင်ဆန်းနှင့် သမီးဒေါ်စု ပုံတို ့ကို မီးရှို ့ခြင်း၊
ပါတီ ဆိုင်းဘုတ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ဓါတ်ပုံများကို မြောင်းများထဲသို ့လွှင့်ပြစ်ခြင်း။ခြေထောက်ဖြင့်
(၆)ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေးပါတီမှ ဒေါက်တာဦးအေးမောင် မှ လူမျိုးရေးအဓိရုဏ်း
(၇)တောင်ကုတ်မြို ့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှ သတင်းထောက်၏ ဓါတ်ပုံ(၁၁)ပုံကို တိုက်ဆိုင်၍
လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေရာ နယ်ထိန်းများက မမြင်ဖူး၊မတွေ ့ဖူးသူများဟု ထွက်ဆိုနေခြင်း
(၈)ရိုးမသစ္စာ ယာဉ်မောင်း ဦးနောင်နောင်၊ယဉ်နောက်လိုက် ကိုအောင်မင်းတို့့မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
များ ဖြစ်သည့်အပြင် ယခုကိစ္စကို အသက်လုပြေးခဲ့ရ၍ မမှတ်မိတော့ပါဟု ထွင်ဆိုနေခြင်း
(၉)တဆက်တစင်တည်း ကုက္ကိုင်းဗလီတွင် လာရောက်သောင်းကျန်းသူများမှာ ဘိုဂါခြုံထားသော
(၁၀)ကြိုတင် ကြံစည် လုပ်ကြံထားသည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်နေခြင်း
(၁၂)ယခုလ (၃၀)ရက်နေ ့တွင် တောင်ကုတ်အကြမ်းဖက်မှုကို သမ္မတဆီ တင်ပြရတော့မည်။
ဥပဒေနည်း လမ်းတကျဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်ရုံ ဖြစ်သည်။
လက်နက်ကိုင်ပြီး မီးရှို့ပြန်တိုက်တဲ့ ကိစ္စကိုကော
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ကို အပုပ်ချဆောင်းပါးဖြင့် ထိပါးစိန်ခေါ်လာသော ဧရာဝတီမီဒီယာ
ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာရေးသားထားတဲ့ သတင်းတပုဒ်ဟာဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရခို်င်တွေ ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိဦးမလားဆိုတာကို ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီများဖက်မှ ထုံးစံအတိုင်းရပ်တည်သော သတင်း ဆောင်းပါးတပုဒ်ဖြင့် စတင် သွေးတိုးစမ်းစိန်ခေါ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ်က ရခိုင်အရေးအခင်းဟာ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ မြန်မာများကြောင့် ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီး အစိုးရရဲ့ အ ရေးပေါ်ကြေငြာချက်ဟာ ဒီ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ မြန်မာတွေကြောင့်လို့ စွပ်စွဲလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ရေး သားထားတဲ့အချက်ကတော့ ဩစတေးလျ သုတေသီတဦးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ထဲက လူတဦးရဲ့ စကားကို ကိုးကားလို့ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေးထားတဲ့အချက်က ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား မ ဟုတ်ဘူးဆိုတာ မြန်မာတွေက တဖက်သတ် မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်နေကြတယ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အပြစ်တင် မှုတွေကို ရှောင်ထွက်ဖို့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက အင်တာနက် သုံးစွဲမှုအခြေအနေကို အစိုးရက ကန့်သတ်ထားတဲ့ အတွက် အတိအကျ ပြောဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပြီး ထွက်ပေါက်ချန်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
သတင်းတပုဒ်မှာ သတင်းခေါင်းစဉ်ဟာအရေးအကြီးဆုံး Main Message ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းခေါင်းစဉ်က “အင်တာ နက်အသုံးပြုသူအချို့ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခ ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့ရ” ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါင်းစဉ်ကပေးတဲ့ မက်ဆေ့ချ်က အင်တာနက်အသုံးပြုပြီး ရခိုင်အရေးအခင်းမှာ ရခိုင်တွေဖက်က ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လူတွေကို စိန်ခေါ် လိုက်သလို လက်ညှိုးထိုး စွပ်စွဲလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခို်င်အရေးအခင်း ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ အလဲဗင်း၊ သဗွိုက်စ်တို့မှာ ထိထိမိမိ မဖော်ပြနိုင် သေးပေမယ့် အင်တာနက်သုံးစွဲသူ မြန်မာလူငယ်များလက်ထဲကိုတော့ သတင်းအချက်အလက်များကို ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ တွေက တဆင့် ချက်ခြင်းဆိုသလို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာရှေ့နေ နာမည်ကြီး ဘီဘီစီနဲ့ ကျန် သော မီဒီယာများဖြစ်တဲ့ RFA, Mizzima, VOA, DVB, Irrawaddy တို့ဟာ အထိုက်အလျောက် နှာစေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ မောင်တောမှာ စတင်ပေါက်ကွဲလာခဲ့တဲ့ ဒီဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ကြတာဟာ ဒီမီဒီယာ တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မဖြစ်တော့လို့သတင်းဖော်ပြခဲ့ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဧရာဝတီက ဆန္ဒပြမွတ်စလင်တွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာကို ဆူးလေမှာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ မွတ်စလင်တဦးပုံနဲ့ တွဲဖက် ဖော်ပြကာ မြန်မာပြည်တွင် မွတ်စလင်များကို ယနေ့ ထူးထူးကဲကဲ နှိပ်စက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံ ရေးသားတင်ဆက်ခဲ့တာ ဟာ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နာမည်ကြီး ဘီဘီစီရဲ့ ဖော်ပြပုံတွေမှာ
“တောင်ကုတ်တွင် မွတ်စလင်ဆယ်ဦးကို လူအုပ်ကြီးက ဆွဲချသတ်ဖြတ်” ဆိုတဲ့ခေါ်င်းစဉ်နဲ့
“မောင်တောတွင် မွတ်စလင်များ ဆန္ဒပြ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မရှေးမနှောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ တကယ်က အကြမ်းဖက် ဆူ ပူခြင်း ဖြစ်စဉ်… ယနေ့ အဓိကရုဏ်းရဲ့အစဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆန္ဒပြတယ်လို့ပဲ ဘက်လိုက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သောကြာနေ့မှာ ဗလီဆင်းချိန် လူစုပြီး ကမော္ဘဇဘဏ်ရှေ့က အဖီတွေကိုဖျက်ဆီးလို့ တည်းခိုခန်းတခုကို မီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ကို “ဆန္ဒပြသူများကို ရဲမှပစ်ခတ်” ဆိုတဲ့ အသွင်အနေနဲ့ ဧရာဝတီ၊ ဘီဘီစီနှင့်တကွ သူတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေမှာ တပြိုင်နက် ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ဇွန်လ ၉ ရက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှာ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ (DVB) စာမျက်နှာမှာတော့ ပီတာအောင် ဆိုတဲ့ သတင်းရေးသူက ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဆန္ဒပြမှုဟာ မောင်တောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ နေအိမ် ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု၊ လူတွေကိုသေကြေအောင်လုပ်မှု ဖြစ်အပြီးမှာ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက ပြုလုပ်ခဲ့ကြ တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ အဖြစ်မှန်တွေကို ဖုန်းသတင်းတွေကတဆင့် အဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝေနေ ကြတဲ့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူလူငယ်တွေကြာကို ပျံ့နှံ့လာခဲ့ချိန်မှာတော့ လူငယ်တွေဟာ ဒေါသပေါက်ကွဲခဲ့ကြပါတော့ တယ်။
ထိုအချိန်မှာ အဓိကရုဏ်းကြောင့် ဘင်္ဂါလီအများစုရှိနေတဲ့ မောင်တောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ရခိုင်တွေဟာ သေရေးရှင်ရေးနဲ့ ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးလောင်မှုများနဲ့အတူ ဦးတည်ရာမဲ့ ထွက်ပြေးနေကြတဲ့ ရခိုင်လူအုပ်ထဲကို မောင်တောမြို့ ငွေပွဲစား ဇော်ဟိန်း ဆိုတဲ့သူရဲ့ နေအိမ်က သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းများထွက်ပေါ် နေပေမယ့် ထိုသတင်းဌာနတွေဟာ မောင်တောမြို့မှာရှိတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးအနည်းစုရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တလုံး တပါဒမှ ဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ ထိုအရေးအခင်းဟာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းအသွင် ဇောင်းပေးဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
မကြာခင်မှာဘဲ ပြည်တွင်းအင်အားကြီးမီဒီယာ အလဲဗင်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာနဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ရခိုင် ပြည်သူတွေရဲ့ သတင်းကို အဆက်မပြတ်ဖော်ပြပေးလာခဲ့ပါတယ်။ တပ်ရဲ့ ပေါ့လျော့မှုတွေကိုလည်း သိသိသာသာ မြင် တွေ့ခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းဆက်နေရင်း ရုတ်တရက်ဖုန်းချ ထွက်ပြေးသွားရလောက်အောင် မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေပြီး နေ့ရောညပါ ကျီးလန့်စာစား ဖြစ်နေခဲ့ရတဲ့ စစ်တွေမြို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်စဉ်မှာ သေဆုံးသူ ရခိုင်လူမျိုးများရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီး တက်လာခဲ့ပေမယ့် ဒီသတင်းဌာနတွေဟာ လုံးဝဖော်ပြခြင်းမပြုတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဘီစီ မြန်မာ ပိုင်းရဲ့ သတင်းဓါတ်ပုံဖော်ပြမှုမှာဆိုရင် ဘင်္ဂလားတဦးရဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ရခိုင်များက မီးရှို့ထားတဲ့ပုံ၊ ဓါးကိုင်၊ ဝါးချွန်ကို်င်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ကို စောင့်ကြပ်နေကြရတဲ့ ရခိုင်များရဲ့ပုံကိုသာ ဖော်ပြပေးထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖော်ပြခြင်း အားဖြင့် နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ကာကွယ်နေကြတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးများကို အစွန်း ရောက် တာလီဘန်များသဖွယ် မြင်တွေ့သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာများနဲ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများရဲ့ တဖက်သတ်ဖော်ပြကာ ရခိုင်လူမျိုးများအပေါ် လျစ်လျူရှုမှုများ ကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာကြတဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများဟာ ပြည်တွင်း Citizen Journalists များ၊ ပြည်တွင်းမှ အွန်လိုင်းသတင်းဌာနများနဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာများမှ သတင်းတိုများ၊ သတင်းရှည်များကို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ဆို ရေးသားကာ ဖြန့်ဝေလာခြင်းဖြင့် စံနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာ များနဲ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ၊ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း၊ စင်ကာပူတို့မှ သတင်းမှားများကို နာရီပေါင်းများစွာ ဆန့်ကျင်ချေပလာခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒီလို တဖက်သတ် သတင်းတွေကို မြင်တွေ့လာရတဲ့ အင်တာနက်သုံးသူ ပြည်သူများရဲ့ မကျေမနပ် ဒေါသ ပေါက်ကွဲသံများဟာ ပြည်တွင်းမီဒီယာများရဲ့ မှတ်ချက်ပြုခွင့်ပေးထားတဲ့နေရာများမှာ လျှံတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပြည်သူတွေ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာကို လုံးဝ လျစ်လျူရှုခဲ့ကြတာကတော့ ထိုပြည်ပ မြန်မာမီဒီယာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာ မျိုးချစ်ရခိုင်ရဟန်းတော်များနဲ့ ရခိုင်များနှင့်တကွ ကျန်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများဟာ ဒုက္ခ ပင်လယ်ဝေနေကြတဲ့ ရခိုင်များအတွက် မိမိတတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် ဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ကြ ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ထို ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများလက်မှာ “DVB, BBC, ပြည်ပမိဒီယာများအလိုမရှိ” စတဲ့ စာသားများနဲ့ သဘောဆင်တူတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်စွဲဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာကို ပြည်တွင်းမီဒီယာများနဲ့ တာဝန်သိ Citizen Journalists များရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှာ တွေ့ရပေမယ့် ဘီဘီစီနဲ့တကွ ကျန် မြန်မာမီဒီယာများမှာတော့ ဆန္ဒပြ ရဟန်းတော်များနဲ့ ဘင်္ဂါလီများကို အလိုမရှိကြောင်း သတင်းဓါတ်ပုံမျာကိုသာ ရွေးချယ်ဖော်ပြခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပြန်ပါ တယ်။
ထို့နောက် မျိုးချစ်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများပူးပေါင်းပြီး ဆူးလေမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်း ထိုပြည်ပ မီဒီ ယာတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ကိုင်ဆောင် ဆန္ဒပြခဲ့ပေမယ့် အလားတူစွာပဲ မည်သည့် ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာများနဲ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အင်္ဂလန် သံရုံးရှေ့မှာ ဒီမီဒီယာတွေရဲ့ သတင်းမှား ဖြန့်ဝေမှုကို ဆန္ဒပြနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ပြည်တွင်းမီဒီယာများကလွဲလို့ ဘယ်မီဒီယာကမှ ဖော်ပြခဲ့တာကို လက်လှမ်းမီသလောက် မတွေ့ခဲ့ရပါ။ ဒီလို ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်တာဟာ ပြည်သူ့ ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာဆို တာ အရှိကိုအရှိအတိုင်းဖော်ပြရတဲ့ ကျင့်ဝတ်ရှိပေမယ့် ပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ဘက်လိုက်မှုကြောင့် လူထုက လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကို အခုလို နည်းလမ်းများနဲ့ ပြသလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းအင်တာနက် စာမျက်နှာများမှာ လည်း ဒီဗွီဘီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို မခံမရပ်နိုင် ဒေါသပေါက်ကွဲနေတဲ့ ပညာတတ်လူငယ်များက တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဖြစ်ရပ်ကိုလည်း ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် မှာ ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အရေးအသားနဲ့ နှပ်ကြောင်းပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဘက်လိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကြောင့် ဒီလို ဖြစ်ရတာကို ဖုံးကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်ကွန်ယက်ဖြန့်ကျက်မှုဟာ အိမ်နိးချင်း ထိုင်း၊ မလေးရှားတို့နဲ့ ယှဉ်ရင်များစွာနည်းပါးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပြည်မက လူတွေသိရတာဟာ သတင်းတွေတက်လာမှ သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမှာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းဟာ တကယ့်ဖြစ်စဉ်နဲ့ အနည်းဆုံး သုံးလေးနာရီကွာပြီးမှသာ သိကြရ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဓိကရုဏ်းဟာ စစ်တွေမြို့ရဲ့ ပတ်ချာလည်နဲ့မောင်တောမြို့ပတ်ချာလည်ရွာတွေမှာ ဖြစ် ပွားနေပြီးမှသာ စစ်တွေမြို့ပေါ်ကိုကူးစက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လျှပ်စစ်မီးတောင် ကောင်းကောင်းမရှိဘဲ အင်တာ နက်ဆိုတာ ဝေလာဝေး ဖြစ်နေတဲ့ ရွာတွေမှာ အခြေပြုပေါက်ကွဲလာတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေဟာ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ မြန် မာများကြောင့် ဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာကတော့ ရယ်ချင်ဖွယ်ဟာသပြက်လုံးတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဩစတေးလျသုတေသီရဲ့ လက်ထဲမှာ စစ်တွေမြို့ရှိ အင်တာနက်ကွန်ယက် လွှမ်းခြုံမှု ရာနှုန်းနဲ့ ဒီဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ကို အခင်းဖြစ်ရာဒေသက လူတွေ ဘယ်လောက်အထိ လက်လှမ်းမီသလဲဆိုတဲ့ ဒေတာအချက်အလက်တွေကို ရရှိထားပြီးမှ “အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေ ကြောင့် ပဋိပက္ခပိုအရှိန်မြင့်” ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ကို ပေးလိုက်တာလားလို့ ပြန်မေးချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စစ်တွေမြို့ကို ကူး စက်လာချိန်မှာ မြို့ရဲ့ အဓိကရပ်ကွက်ကြီးများမှာ နေရာတို်င်း တင်းမာမှုတွေဖြစ်နေပြီး သတင်းရယူသူ သတင်းထောက် များပင်လျှင် အသက်အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အေးအေးလူလူ အင်တာနက်ထိုင်သုံး နေကြပြီး ဒီအင်တာနက်က ဝါဒဖြန့်မှုတွေက အရေးအခင်းဖြစ်ရာ စစ်တွေရှိ ရခိုင်လူထုနဲ့ ဘင်္ဂါလီလူထုထဲကို ထိုးဖောက် ပျံ့နှံ့နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ ရယ်ချင်စရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်များစွာရှိပါတယ်။ ဒီမွတ်စလင် အသိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ ကျန်တဲ့ အာရပ်နိုင်ငံ ပဋိပက္ခ တွေလို မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှုတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုံးဝမရှိခဲ့တာလည်းအမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံရေးပယောဂတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်များကိုယ်တိုင် အစ္စလာမ်ဗလီများကို စောင့် ရှောက်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ထို့ပြင် ရခိုင်သုတေသီသမိုင်းပညာရှင်များရဲ့ စံနစ်တကျပြုစုထားတဲ့ သုတေသနစာတမ်းများရှိပေမယ့်ဒိလိုစာတမ်းတွေကို လျစ်လျူရှုပြီး မြန်မာလူထုတွေက တဖက်သတ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုပဲ ယုံကြည်နေတယ်ဆိုတဲ့ Phil Robertson ဆိုသော လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က လူရဲ့ မှတ်ချက်ကလည်း အ ပေါ်ယံ အင်မတန်ဆန်နေပါတယ်။
မူဂျာဟစ်သူပုန်များ အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန် ရိုဟင်ဂျာများဟာ အယ်လ်ခေးဒါးများနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သ တင်းများ ထွက်ပေါ်လာတာ မထူးဆန်းဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။ AZG အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦးကိုလည်း အယ်လ်ခေးဒါးဆက် စပ်အနေနဲ့ ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာကို 7Days သတင်းဂျာနယ်ကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပေမယ့် ဒီသတင်းလို နိုင်ငံ တော်လုံခြုံရေးအတွက် ထိပ်တန်းတမျှ အရေးကြီးလှတဲ့ သတင်းမျိုးကို ဘယ်ပြည်ပမီဒီယာကမှလည်း အလေးအနက် ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိတာကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂါလီများက ရခိုင်အိမ်များကို မီးတင်ရှို့သော ဖြစ်စဉ်များကို လုံးဝဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိတာကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့ ပတ် သက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပြောဆိုနေပေမယ့် ဒီ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းနဲ့ တကွ မည်သည့်မီဒီယာများက အလေးအနက်ထား ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိတာဟာ ဘာသဘောပါလဲ။ မူဂျာဟစ်သူပုန်ဆိုတာ အစဉ်အလာရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူတွေရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အချိန်မရွေးတိုင်းပြည်ကနေ ဖဲ့ယူသွားလောက်အောင် ခြိမ်း ခြောက်နေတဲ့အနေအထားမှာ ဘာကြောင့် ဒီပြည်ပမီဒီယာတွေအနေနဲ့ လျစ်လျူရှုနေပါသလဲ။ သေချာတာကတော့ ကိုယ်ကျိုးကြည့်လွန်းနေကြပြီ ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန် ဘလော့ဂ်များဖြစ်တဲ့ ဒီမိုဝေယံ၊ ဒေါင်းမာန်ဟုန် တို့လို လူငယ်ဘလော့ဂါတွေက အင်နဲ့အားနဲ့ အနှိပ်စက်ခံ ရခိုင် ပြည်သူတွေအတွက် အမျိုးသာရေးမှာသွေးမကွဲဘဲ ပူးပေါင်းခဲ့ကြပေမယ့် ဒီပြည်ပမီဒီယာတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လက် သိ်ပ်ထိုးပြိး ဘင်္ဂလားများထံ ရောင်းစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအရေးအခင်းကို ကြိုတင်ကြံစည်ထားကြောင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သတင်းစာတစ်စောင်က ယခုနှစ် (၂ဝ၁၂) ဇန်နဝါရီလမှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာကို အခုအချိန်မှာ လေ့လာတွေ့ရှိ သူများက ထုတ်ဖော်တင်ပြကာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ စကားနဲ့ ဆက်စပ်ကိုးကားကာ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး ကို ခြိမ်းခြောက်နေသူများအဖြစ် မီးမောင်းထိုးပြနေပေမယ့် ဧရာဝတီအပါအဝင် ပြည်ပမီဒီယာတွေအတွက်ကတော့ ဒီလို ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်များဟာ မြန်မာ့အရေးသုတေသီလား ဘာသုတေသီမှန်း မသိတဲ့ လူတဦးရဲ့စကားကို ကိုးကားဖို့ လောက် အရေးမပါဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒီပူးမိုနီ လို အစိုးရထိပ်တန်းအရာရှိကြီးရဲ့ စကားထက် Human Right Watch က လူတဦးရဲ့ စကားကို ပိုမို ကိုးကားလိုနေပါတယ်။
ချုပ်ပြောရရင် ဧရာဝတီဟာ ရခိုင်လူထုကို ပါးရိုက်လိုက်တာပါပဲ။ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတဲ့ ရခိုင်များနဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာများရဲ့ သတ္တိသွေးကို စိန်ခေါ်လိုက်တာပါပဲ။ အနှိပ်စက်ခံရခိုင်လူထုနဲ့ မြန်မာ့အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးလာနိုင်မှုကို ဘယ်လို မှ ဂရုမထားနိုင်တော့ဘဲ ငွေကြေးရဖို့သက်သက်သာ လုပ်ဆောင်နေဟန်တူနေပါတယ်။ ဒီလို လူတွေရေးတဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီ ယာကို အားကိုးနေရဦးမယ့် မြန်မာ့မီဒီယာလောကနဲ့ အရေးအခင်းတလျှောက်လုံး ပါးစပ်ပိတ်နေခဲ့တဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း လိုလူရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ မြန်မာလူထုရဲ့ ကံကြမ္မာကို တွေးရင်း ရင်လေးနေမိပါတော့ တယ်။
မောင်တော ပြဿနာ ပိုမိုကြီးထွားလာခြင်း ဆိုတာကို ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ ခွက်ထိုးခွက်လန်ပါပဲ … ။
ပြသနာ ပိုမိုကြီးထွားအောင် လုပ်ဆောင်သူတွေ ဦးနှောက်မရှိကြောင်း တိတိလင်းလင်းရေးပြလိုက်သလိုပဲ …… …… အဟက် … အဟက် …
ပြဿနာကို ပိုမိုကြီးထွားအောင်လုပ်ခဲ့သူတွေထဲမှာ ရခိုင်တွေလဲ
ပါနေတယ် ဆိုတာ မမေ့သင့်ဘူး။မကြားတာလား။မမြင်တာလား။
ရှင်မဟာသီလဝံသ. စကားငှားပြောရတော့လျှင် အားလုံးသူ ထမင်း
စားပြီး မျက်စိ(၂)ဖက်ချို ့တဲ့သူတွေဘဲ။
လိုချင်တာ အဲ့ဒါပါပဲ … ။ ဘက်ဆိုတာ ရှိတယ် …. ဒီစကားကိုစောင့်နေတာပါ … ။
ကျွန်မရေးလိုက်တဲ့ အထဲမှာ …. ရခိုင်တွေ ကုလားတွေ ထည့်မရေးဘူးနော် … ပြသနာ ပိုမိုကြီးထွားအောင် လုပ်ဆောင်သူတွေ လို့ပဲ သုံးနှုန်းလိုက်ပါတယ် … ဟဲ ဟဲ …
(၉)တဆက်တစင်တည်း ကုက္ကိုင်းဗလီတွင် လာရောက်သောင်းကျန်းသူများမှာ ဘိုဂါခြုံထားသောယောကျာ်းအယောက်(၃၀)ဖြစ်နေခြင်း
သစ်ထူးလွင် တစ်ခုထဲမှာတင် သတင်းနှစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတယ် ။ တစ်ခု ကလူ ၅ဝ ။ နောက်တစ်ခု က ၈ ယောက် ။ အခု လူ ၃ဝ ။ အဲ့ဒါတွေ တစ်ခု မှ မဟုတ်ဘူး ။
အမှုးသမား နှစ်ယောက် ထဲ ။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးချင်တာရေးတာ ။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ
ဟုတ်ပါ့ … အဟက် .. အဟက် .. ေ-းထွက်အောင်ရီရတယ် ဗျဲ
ပြန်တိုက်တဲ့ ကိစ္စကို ပြောပြမယ်။ခင်များတို ့အိမ်မှာ ကိုယ့်သားသမီးကို ခြံထဲက အပြင်မထွက်ရ
ဆိုပြီး ထားဖူးလား။အဲ့သဘောနဲ ့အတူတူဘဲ။အလွန် ့ကိုသည်းမခံနိုင်လို ့ပြန်ဆင်တဲ့တန်ပြန်ခံစစ်
(၁)စစ်တွေဖက် တနည်း ရခိုင်ပြည်မြောင်ပိုင်းမှာ မွတ်စလင်မ်တွေကို နိုင့်ထက်စီးနင်းပြုလာတာကြာ
(၂)ခိုင်းစားတယ် (ပိုက်ဆံမပေးဘူး၊တန်ရာတန်ကြေး မပေးဘူး)
ဥပမာ ဆိုက်ကားငှားစီးတာတို ့၊ကုန်ထမ်းခိုင်းတာတို ့
(၃)လမ်းပေါ်ကို မသွားရဲအောင် နှောင့်ယှက်ထားတာတွေ၊
နံပါစဉ် (၁၁) ? (၁၂) ရောက်သွားတယ်။
“(၅)တောင်ကုတ်၊စစ်တွေ မြို့တို ့၌ ဗိုလ်ချုပ်ဦးအောင်ဆန်းနှင့် သမီးဒေါ်စု ပုံတို ့ကို မီးရှို ့ခြင်း၊”
ရခိုင်သူ၊ ရခိုင်သားများ အထက်ပါအတိုင်းလုပ်လိမ့်မည်ဟု မထင်ပါ။
ကျောက်နီမော် ကိစ္စ မဖြစ်ခဲ့လျှင် ကျောက်ဖြူကိစ္စ ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ (ကိုယ့်ဟာကို သေချာစဉ်းစားပါ)
စကားမစပ် ဘိုဂါ ဆိုတာဘာလဲဗျ တကယ်မသိလို့ပါ။
ပို့စ် နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး..မြန်မာစီတီဇင် မေးထားတာလေး ဖြေဖို့ပါ..
ဘိုဂါ (ခ) ဘွတ်ရ်ခါ Burqa ဆိုတာ အစ်စလမ် အမျိုးသမီးများဝတ်
မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်နီမှော်ကျေးရွာအုပ်စု သပြေချောင်းကျေးရွာအနီး မသီတာထွေးအား အဓမ္မပြုကျင့်ကာ ပစ္စည်းများလုယူပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့သော ထက်ထက်(ခ)ရော်ရှီး၊ ရော်ဖီးနှင့်ခိုချီးတို့ သုံးဦးအား ကျောက်ဖြူခရိုင်တရားသူကြီးက ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂ ၁/ဂ အရ သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ခင်ဗျားတင်ပေးတဲ့ တောင်ကုတ်က ဆယ်ယောက်သေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ
အွန်လိုင်းမှာ အတော်ပျံ ့သွားပြီး ခင်ဗျားတို့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ အင်တာနက်ဆိုင်တွေပြေး.လိုက်ဖြန် ့.ဓာတ်ပုံတွေ ပရင့်ထုတ်
ဦးအာဂတင်ခဲ့တဲ့ ပို ့စ်မှာ ပြန်ကြည့်ကြည့်..
အေးဝတီကြီး ဆိုတာ ဘူကြီးလဲဟင်… မြန်မာစကားသိပ်မပြောတတ်ဘူးနဲ.တူတယ်နော်… ဖင်ပိတ်ငြင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲရှိရင် မမလား ကိုကိုလား မသိတဲ့ အေးဝတီကြီးကို ခေါ်ပြီး ပြိုင်ခိုင်းမယ်…. ဟိဟိဟိ
ဘာမှန်းလဲမသိဘူး ပြီးသွားတဲ့ ကိစ္စကို ချီးခြောက်ရေလာနှူးနေတယ်… ဟွန်.
အော်သနားစရာကောင်းလိုက်တာ လူလိုပြောတာကို လူဖြစ်ပြီး နားမလည်နိုင်ရှာဘူး ပြန်ကိုက်တယ် ပေါ့..ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
ပြသနာတွေကဟိုမှာငြိမ်သွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ အကြမ်းဖက်မှု့လိုလားသူများကတော့ မငြိမ်သေးပဲ အွန်လိုင်းကနေ တဆင့်ထပ်ဖွနေကြပြန်ပြီ။ ကွန်မင့်တွေမှာ လိုချင်တဲ့စကားကိုနှိုက်ယူ။ ပြီးမှဝါဒပြန်ဖြန့်။ အရေးအခင်းဖြစ် အောင်ထပ်လုပ်။ အခွင့်အရေးတွေထပ်တောင်း။ အခုကသူတို့ခံလိုက်ရတာက သူတို့ဆင်တဲ့ အကွက်ထဲမဝင်သွားလို့ ပြသနာထပ်ဖြစ်အောင် ထပ်ဆွနေပုံရတယ်။ သူတို့က သူတို့ကို အစိုးရကပစ်စေ ချင်တာ။ အဲဒါမှ သူတို့စွပ်စွဲလိုတဲ့ မျိုးသုန်းသတ်ဖြတ်မှု့ပုံပေါ်မှာ။ အခုက မပစ်တော့ အော်တာအလကား လူရီစရာဖြစ်တော့ နောက်အလားတူပြသနာဖြစ်အောင်ဖန်တီး၊ မခံနိုင်လို့ပစ်တော့မှ ထပ်အော်၊ အခွင့်အရေး လိုတာထက်ပိုတောင်း။ ဟုတ်နေတာပဲ။ ဟိုကပြီးနေပြီ။ သူတို့မှာမပြီးနိုင်မစီးနိုင်အွန်လိုင်းကနေ ဖွလို့ကောင်း တုန်း။
ဘယ်တုန်းက ဖွတဲ့ပို ့စ်ကိုတင်ပါတယ် သက်သေရှိသလား။
ပို ့စ် ပထမဆုံး တင်တင်ခြင်း လူမဆန်စွာရိုက်သတ်ခံထားရပုံ
တွေ တင်ခဲ့တာ သိစေလိုတဲ့ စေတနာနဲ ့ဘဲ။
နောက် အများပြည်သူ မတွေ ့လိုက်ရသူတွေရှိတယ် ပြောလာ
လို ့ထပ်တင်တာ တကြိမ်၊တောင်ကုတ်သားတွေ ပြန်ဆဲနေတာ
ကို တင်ပြတာ တစ်ကြိမ်၊ခုလဲ အမှုမှန်ပေါ်တော့မှာကို သိစေ
လိုတဲ့အတွက် တကြိမ် ပေါင်း လေးကြိမ်ဘဲရှိအုံးမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ဖွတာမဟုတ်ဘူးဆိုလဲ ဆောရီးပါ။ ပြန်ပြင်ပြောပါ့မယ်။ အရောက်ပို့တာပါ။
So called rohinjar ( Bengali ) must return to your Bangladesh country. We and they are totally different with language, culture, face, habit, history and others. At the Bangladesh side , they are Bengali. If they arrive here by boat or cross border, They change to rohinjar ( Bengali ). If they will be called rohinjar theirselves, they all are liars.
ပူကြောင်စီရေ မင်းကို လက်မလေးအောက်စိုက်ပြီး အားပေးသွားတယ်။
နောက်တော့ အပယ်ဘုံ၊ငရဲဘုံ၊အသူရကာယ်ဘုံတွေထိ မေတ္တာဝေ အမျှပေး
အိမ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ် တို့သွေးရင်းရခိုင်လူနည်းစုကို အနိုင်ကျင့်တာလဲမခံနိုင်ဘူးဟေ့
စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ထဲ မပါတာ.ဘာကြောင့်ပါလိမ့်.. :rolleyes:
သူကသိပ်တော်တာဆိုတော့လေ။ တကိုယ်တော် ဆားပုလင်း အေးဝတီကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
မကြာခင်အမှန်တရားနဲ့အတူ ကိုယ်ထင်ပြမယ့် တကိုယ်တော်ဇာတ်လိုုက်ကျော်ပါရှင့်။
စိတ်ဆိုးနော် ဝတီလေး…။ စတာ။
(၅)တောင်ကုတ်၊စစ်တွေ မြို့တို ့၌ ဗိုလ်ချုပ်ဦးအောင်ဆန်းနှင့် သမီးဒေါ်စု ပုံတို ့ကို မီးရှို ့ခြင်း၊ ဒါကိုတော့ မဖြစ်နိုင်တာကို ပြောတာပါ တောင်ကုတ် သားတွေမှာ အဲဒီလို မျိုး မလုပ်ဘူးဆိုတာ ရခိုင်တွေအကုန်လုံး သိတယ် လာဖွမနေပါနဲ့ တော့ အခုတောင် ဒုက္ခ သည် စခမ်းတွေမှာ ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါ သည်ကလေးတွေအယောက်၁၀ဝ ကျော်သွားပြီ
မောင်းတောတွင် ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီများဆူပူအကြမ်းဖက်မူဖြစ်လာစေရန် ဖန်တီးသူမှာတရားခံအစစ်မှာ ဤပို့စ်၏ပိုင်ရှင်
တောင်ဂုတ်မြိုု့တွင်ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ပြည်တွင်းနေမူစလင်ဘာသာဝင်(၁၀)ဦး အသတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ် အတွင်းသေဆုံးခဲ့ရသူ
ပြည်တွင်းနေမူစလင်ဘာသာဝင်(၁၀)ဦး ၏ သွေးသံရဲရဲဖြင့်သေဆုံးနေသောပုံများကို (ရည်ရွယ်ချက်ရှိမရှိမသိ) ရိုက်ကူး၍
“ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးသတ်သလို…….” ခေါင်းစီးကြီးဖြင် (သူဂျီး အလစ်တွင်) MG ပေါ်တင်ပြီး မူစလင်ဘာသာဝင်
ပြည်တွင်းနေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အချို့သည်ပင် ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်မိပြီးသကာလ၌ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ မြို့လယ်ခေါင်ရှိဗလီတခုရှေ့
တွင်စုရုံး၍ “အေးဝတီကြီး” ဆိုသူ တင်ထားသော MG မှဓါတ်ပုံများကိုကူးယူကိုင်ဆောင်ပြီးသကာလ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါလား..ထိုရက်အတွင်းမှာပင် မောင်းတောမြို့ရှိ ဗလီတခုမှဝတ်ပြုပြီးဆင်းလာသော
ရိုဟင်ဂျာခေါ်ဘင်္ဂါလီ မူစလင်တို့ အုပ်စုလိုက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းလုပ်ရပ်ဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုစတင်ခဲ့လေတော့၏။
ရန်ကုန်မြို့ရှိအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် ဆင်ခြင်တုံ့တရားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ အေးချမ်းစွာပြီးဆုံးသွားသော်လည်း..
မောင်းတောမြို့ရှိရိုဟင်ဂျာခေါ်ဘင်္ဂါလီတို့သည် ဆင်ခြင်တုံ့တရားအားနဲကြသည်ဖြစ်၍ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်ခဲ့လေ၏။
တရားခံအစစ်သည်ကား…မည်သည့်ဘာသာ မည်သည့်လူမျိုး မည်သည်နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်သည် မသိ
ယ္ခုလည်း မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပေါက်ကရဝင်ရေးနေသည်ကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြပါကုန်လော့…
ဤကား အမှန်ပင်ဖြစ်ချေတော့သည် တမုံ ့
ဒါပေသိ..ဒီအရှိတိုင်းဟာတွေကြောင့် ခုလို ရှုပ်ကုန်သည် မဟုတ်ပါလော..
အခုဂျာနယ်တွေကိုလဲ အဲသလို သွေးကြွစေမဲ့ ပုံတွေတင်ရင် ပယ်ခိုင်း..အရေးယူ..ထုတ်ဝေခွင့် ခေတ္တပိတ်နေတယ်
အခုရန်ကုန်ကု္ကိုင်ဗလီလာဖျက်တော့ကောအရေမယူသေးပါလားမီးမွေးထားတာလား၊ . .
နှစ်ဖက်စလုံးထောက်ပံ့ပါ၊အခုတော ထောက်ပံငွေများ တဖက်ထဲသို့သာရောက်ရှိပါသည်။တကယ်အနာခံရသူများ၊ထံမရောက်ရှိပါ။
ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပါ . .အခုထိတောတစ်ယောက်မှမဖမ်းသေးပါ၊တောင်ကုတ်မှတော့ဘိန်းစား၊အရက်သမား
၁ဝ သိန်းထောက်ပံ့မည်တဲ့ ။တကယ်တရားခံညွန်ကြားသူများကတော့ စုံစမ်းရေကော်မရှင်နှင်အရက်ဘီယာထိုင်သောက်
နေကြမည်၊ကားကြီးတဝီဝီစီးနေကြမည်. . သမ္မတကြီးကကော အစီရင်ခံစာလေးဘဲဖတ်ချင်တာလားခင်ဗျား . .ထိထိရောက်
ဒါကိုသမ္မတကြီးသိပါစေ၊လက်တွေသွားလှူမယ်သူတွေကို လုံခြုံရေးအာမမခံနိုင်တဲ့ ၊သူတို့ဆီဘဲပေးထားပါတဲ့
တရက်ထဲငွေသိန်းသောင်းချီအလှုခံရရှိသည်၊ .. ဒုက္ခသည်စခန်းမရောက်ရှိပါ၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဆီဆိုပိုဆိုး
လုံးဝမရောက်ပါ ၊UN ကလူတွေကိုလူ(၁၂)ယောက်နဲ့သာတွေ့ပေးသည်၊ဒုက္ခသည်တွေဆီလာတောင်မကြည့်ပါ . . .
အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသူတိုင်း ထောက်ခံပါတယ်။
ကွာ။မင့်သာ မရှိရင် ငါတို ့သိခွင့်တောင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
အော်..အော်…တို့ရွာထဲမှာ ကုလားတသိုက် အချင်းချင်းအားပေးနေကြပါလား…
တရားမဝင်များလာပြီး သူတို့က နေရင်းရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ချယ်နှယ်ခဲ့ကြတယ်..
ခင်ဗျားတို့ကိုမေးမယ်…ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မွတ်ဆလင်ပြည်နယ် ဖြစ်သင့်မသင့်..ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဗူးသီတောင်မောင်းတောမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း၁၅ရာခိုင်နှုန်း လောက်ဘဲရှိတဲ့
ရွာထဲလဲ ခပ်တည်တည် နဲ ့တစ်ခုမှမမှန် အတင်းအဖျင်း ၊ မဟုတ် ဝါဒ လာဖြန် ့တဲ့
ဆားကလောက် အေးဝတီကြီး ၊ အောင်လ လို ကောင်တွေ များလာပါပေါ့ ။
သဂျီးကတော့ ပွဲဆူလေ ကြိုက်လေ ထင်ပါရဲ ့
ပေါက်ဖော်ပြောသလိုဘဲ လဘက်ခြောက်ဝယ်ရောင်းလုပ်တာ နေ ့တွက် ပိုစီလောက်မယ် ။
ဆားကလောက် အေးဝတီကြီးရေ ၊ သနားလို ့ကွန်မင့်ပေးခဲ့တယ် ။
ကြိုးစား ပမ်းစား ရေးထားတာပါပဲလား ဖတ်ရတာတောင် သနားချင်လာပြီ ဟား ဟား
ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက်ကတော့ တကယ်ထွက်တယ် ။ လူတွေက ကျောက်ခေတ်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ ပြောသမျှမစဉ်းစား တတ်ဘူးကိုး ။
ကုလားကျင့် ကုလားကြံဆိုတာ ဒါမျိုးထင့်ပါ့
မြန်မာပြည်အနောက်ဖက် ကမ်းရိုးတန်းက သတင်းတွေမတင်ရ အမိန် ့ကို
Kai ထုတ်တော့ ကျနော် မပါဘူးဆိုတာ သတိထားမိဘူးထင်ပါတယ်။ဒါ
ကျနော့် သတင်းအရည်အသွေးနဲ ့သိက္ခာဘဲလေဗျာ။
အေးဝတီ ကြီး ကတော့ သူကြီးခေါင်း(ဂေါင်း) ကိုရောင်းစားနေပြီ….လာရှင်းပါဦးဗျ
လာမရှင်းရင် နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့ အေးဝတီ ကြီး ရဲ့အပေါင်းအပါတစ်သိုက်နဲ့ အလိုတူအလိုပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော် အဟိ
ဟုတ်ကဲ့။ ဤနိုင်ငံတွင် ဤဥပဒေအတည်ဖြစ်ရမည်။ ( မှတ်ချက် ငါနှင့် ငါ့အမျိုးမပါ ) ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အသားကျလာပြီပဲ။ ဒီလောက်နဲ့တော့ခံစားမနေတော့ပါဘူး။
သူကြီး ရှင်းစရာမလိုဘူး .. ကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ် ။ဒါ သူ့ရဲ့ ဒုတိယ ပိုစ်မှာ သူကြီးတင်ထားတာ။
@အေးဝတီကြီး နှင့်.. မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ခြမ်းမှ ရွာသူားများခင်ဗျား..
တောင်ကုတ်မြို့အရေးအခင်းအပါအဝင်… လူမျိုးရေး..ဘာသာရေးဆိုင်ရာပို့စ်များကို.. သတင်းအနေနဲ့.. ဓါတ်ပုံအထောက်အထားတင်တာကလွဲပြီး.. ကိုယ်ပိုင်သဘောထား.. မှတ်ချက်တို့နဲ့..ရေးတင်ခွင့်မပေးနိုင်တော့ပါ..
မြန်မာတပြည်လုံးမှာနေကြတဲ့.. မြန်မာလူထု(မွတ်စလင်များအပါအဝင်) အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်..
အပျက်ပျက်နဲ့.. နှာခေါင်းသွေးထွက် ဆိုတဲ့.. စကားပုံရှိပါတယ်..
မြန်မာပြည်ကိုချစ်ရင်.. မြန်မာဆိုရင်(မွတ်စလင်များအပါအဝင်) ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွား.. .စောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်..
သူ့ရဲ့ တတိယ ပိုစ်က အပိတ်ခံထားရပါတယ် ။
ဒါ စတုထ္ထ ပိုစ် ပါ ။
ဒါလေးတောင် အရှက်မရှိ ဗြောင်လိမ်ရဲ ရေးရဲမှ မင်းတို့ ရဲ့ စာတွေ ဘယ်လောက် လံကြုတ် ထားသလဲဆိုတာ ပြောစရာ မလိုလောက်တော့ဘူးထင်ပါတယ် ။
မြန်မာအနောက်ကမ်းရိုးတမ်းကိစ္စတွေကို.. လက်ရှိအစိုးရက.. case by case ရှင်းပေးသွားမယ်မျှော်လင့်မိတယ်..
ကျောက်နီမော်က.. မုဒိန်းကျင့်အသတ်ခံရတဲ့အမှုကို..တရားရေးက.. တရားခံတွေကို သေဒဏ်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမို့.. တောင်ကုတ်မှာ.. မြန်မာနို်င်ငံသားတွေ.. အသတ်ခံရတဲ့အမှုအတွက်လည်း.. ကျုးလွန်ခဲ့သူတရားခံတွေမှာ.. သေဒဏ်ထက်လျှော့စရာတော့.. မမြင်မိပါ..။
မောင်တောကစလိုက်တဲ့.. အဓိဂရူဏ်းတွေအတွက်လည်း.. တရားရေးက. ဆိုင်ရာပြစ်မှုအလိုက်.. ဝင်ဆုံးဖြတ်မယ်. သေချာပါတယ်..
အမှုတွေကို..case by case တပိုင်းစီမြင်ကြည့်ကြစေလိုပါကြောင်းနဲ့.. ရှုပ်ထွေးသွားအောင်.. လူမျိုးရေး..ဘာသာရေးဖက်ဆွဲမပါသွားအောင်.. ထိမ်းသိမ်းလုပ်ကြဖို့..
.. မြန်မာမှန်ရင်.. တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင်.. တိုင်းပြည်ကိုချစ်သူတိုင်း(တိုင်း).. တာဝန်ရှိပါကြောင်း…။
ငြိမ်အေးလာတဲ့.. ကိစ္စတွေကို..”ချေးခြောက်ရေနှုး” ပြန်ပြန်.. ဆွဲမတင်ကြစေလိုပါကြောင်း..
ဒီအချိန်မှာ အရေးကြီးနေတာက.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်.. သွားခေါ်လာခဲ့တဲ့.. ဥရောပရင်းနှီးမြုတ်နှံသူတွေ.. မြန်မာပြည်ထဲဝင်လာပြီး.. အလုပ်လုပ်ကြရင်.. မြန်မာပြည်ကြီး.. ကောင်းအောင်.. ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြရမယ်.. လုပ်ကြရမယ်..ဖြစ်ကြောင်း..
စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းဖြစ်နေတဲ့.. ဥရောပကို.. စီးပွားရေးထိပ်တန်းရောက်လာတဲ့.. ချိုင်းနား..အာစီယံ..အိနိ္ဒယ..စတဲ့အာရှနဲ့.( မြန်မာပြည်ခေါင်းထိုးခံပြီး.)..ပေးတွေ့ရာမှာ.. ပညာပါပါ.. လှည့်ကစားတတ်ကြဖို့ဖြစ်ကြောင်း..
လူထုခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့.. အမျိုးသားရေးကို.. မျက်ခြေမပြတ်ကြစေလိုကြောင်း…။
လုပ်တတ်ရင်.. ၁ဝနှစ်အတွင်းး မြန်မာဟာ. အာစီယံထဲ..ထိတ်တန်းရောက်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်း..
အခြေအနေ..အချိန်အခါ..အခွင့်အရေး.. ၂ခါ(၂ခါ) မလာပါကြောင်း…
အရှိန်လျော့သွားတဲ့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု့ လူမျိုးဘာသာရေး လှုံ့ဆော်မှု့တွေကို
ပြန်မီးထိုးပေးတဲ့ ဒီပိုစ့်ကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။
ကိုထူးဆန်းရေ …သို ့
ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး ဟိုဘက်ပို ့မှာ + ပေးတာ – ပေါ်သွားပါကြောင်း။ ပြန်ပြင်လို ့လည်းမရတာနဲ ့ဒီကရေးလိုက်တာ ၊
ဒီကိတ်စအတွက်ရေးတဲ့ပို ့စ်မှာ ကျမ အတတ်နိုင်ဆုံးကျမ မရေးဖို ့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့ အထပ်ထပ်အခါခါ ထပ်တလဲလဲ လုပ်ကြံပြီး ကိုယ်လိုရာကိုအတင်းဆွဲပြီးရေး၊ ပြီးရင် အထပ်ထပ်တင်၊ အဲဒါကို စိတ်ပျက်လွန်းလို ့ပါ။ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာထိရင် လူတိုင်းနာတတ်တာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဒီပိုစ့် ရေးသူကို ကျွန်မလည်း တစ်ခုပြောချင်တယ်။ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း လေးစားသင့်တယ်။ အခုတော့ကိုယ်ပြောချင်တာကိုပဲ စွတ်ပြော၊ ထပ်ဖျက်ရင် ထပ်တင်မယ် လုပ်လိုလုပ် မရင့်လွန်းဘူးလား။
မန်းဂေဇက်ထဲကသူတွေမှာ မျက်စိပါတယ်၊ နားပါတယ် ( မျက်လုံးကြီးကြီး၊နားကြီးကြီးထားပြီးသတင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်တတ်သူတွေချည်းပဲ)၊ အစွန်းနှစ်ဘက်မရောက်ဖို ့၊ လှည့်ကွက်ထဲ မဝင် မိကြဖို့ကြိုမြင် ကြိုတွေးတတ်သူတွေကလည်း ရေးနေတာပဲ။ အဲဒါကိုပဲ မပြီးနိုင်မစီးနိုင် ခုလိုတွေ ထပ်လုပ်တော့ လူတွေက ရှင်ပြောသမျှ ယုံလာကြမှာမို ့လား။ အဲဒါကြောင့် ကျန်သူတွေကိုလည်း အကြံပေး ချင်ပါတယ်။ အသံကြားတိုင်း ထမကြည့်ကြပါနဲ ့၊ အိပ်ရေးပျက်တယ်၊ (ခုကတော့ အချိန်ကုန်တယ်ပေါ့) ဒါ့အပြင်တခုပိုတာက ဒေါသဖြစ်ရတော့ အကုသိုလ်လည်းများပါတယ်လို ့။
အမှန်ဘဲ ကိုယ်လဲ အေးချမ်းစေချင်တယ်။ဒါပေမယ့် မင်းတို ့သိထားသင့်တာက
ဘုန်းကြီး(၁၀)ပါးကို ကားပေါ်ကဆွဲချ ရိုက်သတ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ။
ဟဲ့….ခွေးစကားမပြောနဲ့ ဘယ်က ဘုန်းကြီးက ပါလာပြန်တာလဲ …. ။
မနှိုင်းကောင်း နှိုင်းကောင်း ပခုံးချင်းလာယှဉ်မနေနဲ့ …….. ။ ထွီးးးးးးးးးးးးးးးးးး :mad:
လာ လာချည်သေး— အမွေးစုတ်ဖွားနဲ့ လာနှိုင်းရသလား—
မင်းတို့ နှု်ိင်းသင့်တာ —အမွေးထူ သတ္တဝါ နဲ့နှိုင်းဟေ့ —–
ဟားဟား…ဒါမျိုးဆို ဗမာပြည်မှာ ဟို စကားပုံ မှန်သွားမှာပေါ့ ။
ဘာတဲ့ ..ကုလားနဲ့ ငါး အရုပ် ရေး ပြရမယ် …ဆိုတာလေ…။